Isibuyekezo se-Europa Casino- Ibhonasi ka-R24,000
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-europa casino
Isibuyekezo se-Europa Casino
Isofthiwe:Playtech, NetEnt, Red Tiger Gaming, Quickspin, Betsoft
Ibhonasi Lokukwamukela:R100 iBhonasi Lamahhala
R24,000 Ibhonasi Lokukwamukela
Yaqala ukufika embonini kudala ngo-2003. I-Europa Casino ingumakadebona embonini yamakhasino e-inthanethi uma iqhathaniswa namanye amakhasino amasha. Iphethwe yi-Winner Casino Group, futhi i-Europa yakha inqwaba yabalandeli enkulu, futhi noma inamashumi amabili eminyaka ngemuva kwayo, isathola indlela yokugcina izinto zizintsha.
Nakuba-ke lincane idumela layo, namanje i-Europa isebenza kahle. Ngemidlalo eyahlukahlukene enikezwayo, izindlela zokubhenka ezinhle, nenguqulo yeselula elulula ukusebenzisa nesheshayo, kusho ukuthi i-Europa Casino kufanele igcine iningi labadlali bejabule kakhulu.
Njengoba sesikushilo lokho, ake sihlolisise lokho i-Europa Casino ekunikezayo.
Amabhonasi Okukwamukela e-Europa Casino
Uma kukhulunywa ngokuheha abadlali abasha kumaplatifomu awo, amakhasino e-inthanethi asefunde izindlela ezintsha futhi asencintisana kulezi zinsuku. I-Europa Casino ayihlukile futhi inezikhuthazo ezimbalwa ezikhona zokukukhuthaza ukuba ubhalisele i-akhawunti..
Kubadlali abasha kupulatifomu, kukhona amabhonasi okukwamukela amaningi ongawathatha. Abasebenzisi abasha abadiphozitha imali yokuqala kuplatifomu banelungelo lokuthola amabhonasi afika ku-R24,000. Le phakethe lokukwamukela lihlukaniswe laba izitolimende zamasonto onke nezanyanga zonke, okuyindlela enhle yokwelula amabhonasi kunyanga yakho yokuqala ukudlala ngawo.
Ibhonasi Yediphozithi Yokuqala: I-Europa Casino izokupha u-100% webhonasi elinganayo nediphozithi yakho ize ifike ku-R1000, futhi izosebenza unyaka wonke wokuqala wobulungu bakho. Izovuselelwa Fuma wenza idiphoozithi yakho yokuqala yenyanga. Ngaphezulu kwalokho, uthola ibhonasi ka-R250 yokuba yilunga yamasonto onke.
Ibhonasi Yediphozithi Yesibili: Idiphozithi yakho yesibili oyenza kuplatifomu izokunikeza ibhonasi engu-60% wediphozithi yakho, ize ibe ngu-R500
Amakhodi Ebhonasi Yediphozithi Engekho e-Europa Casino
Uma ungafuni ukufaka imali yangempela engozini ngenkathi uzama ipulatifomu, i-Europa Casino izokunikeza ibhonasi ka-R100 ngaphandle kwesidingo sokudiphozitha imali kuplatifomu. Mane nje uvule i-akhawunti ukuze uthathe umklomelo wakho!
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Europa Casino
Ibhonasi yanyanga zonke: Ukuthola ibhonasi yanyanga zonke engu-100% wamadiphozithi ize ifike ku-R1000, ngena ngemvume bese ufaka ikhodi yephromoshini ethi “XM5YTB3”.
Okwenzeka nsuku zonke nokuwina Bamba iqhaza kumiqhudelwano wamasonto onke lapho uncintisana khona ukuze uwine isabelo sika-$250,000 ngokheshi.
Ibhonasi yokuba yilunga yamasonto onke: Uma ungomunye wamakhasimende e-Europa Casino athembekile, uzokwazi ukuthola ibhonasi yokuba yilunga, engafinyelela ku-R250 isonto ngalinye.
Tshela umngane: Uma unethimba labangane abanentshiseko efanayo ngemidlalo eku-inthanethi njengawe, le yindlela enhle yokwenza imali ethe xaxa eceleni. Thola ibhonasi ka-R500 ngomngane ngamunye ommemayo kupulatifomu. Ngaphezulu kwalokho, umngane wakho naye uzothola u-R250 ngqo ku-akhawunti yakhe.
Indlela Yokubhalisa e-Europa Casino
Nakuba ubungaxolelwa ukuphazanyiswa ngakho konke okwenzakala esikrinini lapho uzulazula uya ekhasini lasekhaya, ukungena ku-akhawunti yakho ye-Europa Casino kuyinto elula. Ukuze ungena, yiya phezulu ngakwesokudla kwekhasi lewebhu bese uchofoza inkinobho ethi ‘bhalisa / ngene ngemvume’.
Uma une-akhawunti, landela imiyalelo esesikrinini bese ukhetha lokho okukufanele kahle. Uma usuvele unayo i-akhawunti ye-Europa Casino, sicela ukhululeke ngokweqa le ngxenye yesibuyekezo. Uma, noma kunjalo, usadinga ukuvula i-akhawunti, qhubeka ufunda.
Yiya ekhoneni eliphezulu kwesokudla sekhasi lasekhaya.
Chofoza inkinobho enkulu ethi ‘bhalisa’, ezoqala inqubo yokubhalisa.
Landela imiyalelo evela kusikrini, uqaphele ukuthi ufaka imininingwane eqondile.
Uma usuyifakile imininingwane yakho – njengegama, i-imeyili, ikheli – futhi usuthole iphasiwedi ephephile, chofoza uthumela ukuze uye esigabeni esilandelayo.
Kuzothunyelwa i-imeyili ku-akhawunti yakho ye-imeyili ngenhloso yokuqinisekisa. Lapho usuthole lokhu, chofoza isixhumanisi bese uqedela inqubo yokubhalisa.
Buyela ekhasini lasekhaya le-Europa Casino bese ungena ngemvume ngemininingwane yakho entsha ye-akhawunti yakho.
Imidlalo Yasekhasino Ye-inthanethi Ongayidlala e-Europa
Izinhlobonhlobo Zemishini Yokugembula (Slots)
Ama-slot angeminye yemidlalo ethandwa kakhulu emhlabeni futhi i-Europa Casino ayiphambanisi ngalokho. Ngamakhulu emidlalo eyahlukene yama-slot enikezwayo, kuzo zonke izinhlobo ezahlukahlukene zemidlalo, i-Europa Casino inama-slot ahamba phambili embonini!
Uma kuziwa emidlalweni yetafula yakudala, i-Europa Casino ine-roulette nemidlalo yamakhadi eyahlukahlukene. Itholakala ngokuphazima kwehlo, futhi i-Europa Casino ineqoqo elikhulu ngokwanele ukuthi ungadlala umdlalo omusha ngazo zonke izikhathi ungena ngemvume futhi ungadlali umdlalo ofanayo kabili.
Uma ukudlala ekhasino ebukhoma kuyinto yakho, ngeke udunyazwe i-Europa Casino. Ngazo zonke izinhlobo zama-slot, imidlalo yetafula, imidlalo yamakhadi, nokunye okukhona, i-Europa Casino iyisitolo esinakho konke!
I-Europa Casino Yeselula: I-Europa Casino Iqhathaniseka Kanjani Kuselula?
Nakuba ingenayo i-app yeselula, i-Europa Casino yenze umzamo omkhulu ukuklama iwebhusayithi yeselula eyenza konke okufanele ikwenze. Lokhu kusho ukuthi uma ukwazi ukuthola idivayisi enesiphequluli sewebhu nokuxhumeka kwe-inthanethi okuhle, ungavula konke okunikezwa yi-Europa Casino.
Ezikhathini eziningi, imidlalo yeselula ikala kahle esikrinini esincane futhi iyashesha futhi isebenza kahle njengenguqulo yedeskithophu. Lokhu kusho ukuthi alehli izinga lekhwalithi yokudlala neyezithombe uma unquma ukuthatha umdlalo wakho ohambeni. Ukuba newebhusayithi eyinguqulo yeselula kunokuba ne-app ezimele kusho ukuthi asikho isidingo sokuthi udawunilode lutho kudivayisi yakho, okuvula isitoreji kufoni yakho noma kuthebulethi yakho.
Ngingakwazi Yini Ukudawuniloda i-Europa Casino kuselula?
Ngenxa yokuthi i-Europa Casino ayisebenzisi i-app yeselula ezimele, kusho ukuthi ungangena ku-akhawunti yakho usebenzisa amadivayisi amaningi. Noma une-iPhone, i-tablet, noma idivayisi ye-Android, ungakwazi ukufinyelela ku-Europa Casino ngomzuzwana usebenzisa isiphequluli sedivayisi yakho.
Lokhu kusho ukuthi asikho isidingo sokudawuniloda amanye ama-app okusebenzisa kudivayisi yakho – vele uvule isiphequluli sakho bese uqala ukudlala!
Izindlela Ezivunyelwe Zokukhipha Imali e-Europa Casino
EasyFFT Yebo 48-72 hrs
InstaDebit Yebo 24 hrs
Skrill Yebo 48-72 hrs
Neteller Yebo 48-72 hrs
EcoPayz Yebo 48-72 hrs
EntroPay Yebo Lapho Uyikhipha
E pro Yebo Lapho Uyikhipha
iDebit Online Banking Transfers Yebo Izinsuku ezingu-5
Izindlela Ezivnyelwe Zokudiphozitha e-Europa Casino
E pro Yebo
iDebit Online Banking Transfers Yebo
Isungulwe: 2004 Inombolo Yocingo Yamahhala yase-SA: Ayikho
Umphathi ngu: Antigua and Barbuda Financial Service I-imeyili: [email protected]
Ilayisense ngeyase: Dutch Antilles Ingxoxo Ebukhoma: Yebo
Uhlobo Ongaludawuniloda: Yebo Usizo lwe-24/7/365: Cha
Uhlobo Olungadingi Ukudawunilodwa: Yebo Uhlobo Olungadingi Ukudawunilodwa: Yebo
Ubuhle Nobubi be-Europa Casino
Uma ufuna ikhasino ye-inthanethi ethembekile enikeza imidlalo eminingi esezingeni eliphakeme, ungakhetha okubi kakhulu kune-Europa Casino. Ngeminyaka engaphezulu kwengamashumi amabili yesipiliyoni ngaphansi kwebhande layo, uma kuziwa emakhasinweni e-inthanethi, i-Europa Casino iyazi ngempela ukuthi yenzani. Nakuba ukwakheka kwewebhusayithi yayo inzima ukusebenzisa, iyasebenza ngendlela emangalisayo futhi ithembekile. Sekukonke, i-Europa Casino iyisinqumo esihle kubadlali abasha abafuna ukuqala ku-inthanethi!
Yini Eyenza Abadlali Abaningi baseNingizimu Afrika Bakhethe i-Europa Casino?
Izindlela eziningi zokukhipha imali
Amabhonasi okukwamukela amahle
Izikhalo Ezijwayelekile ze-Europa Casino
Iwebhuasayithi ihlelwe ngendlela yakudala
Udinga i-akhawunti ephelele ukubheka iwebhusayithi — ayikho imidlalo-edlalwa-mahhala
Ingabe i-Europa Casino isemthethweni eNingizimu Afrika?
Yebo, abadlali bangafinyelela i-Europa Casino bese-SA.
Ngiyikhipha kanjani imali ku-Europa Casino?
Ngena ku-akhawunti yakho bese uya engxenyeni ye-Dephozithi/Yokukhipha Imali yewebhusayithi. Uma usufikile, chofoza ku-tab yokukhipha Imali bese ukhetha ukuthi ufuna ukuthola imali yakho kanjani. Faka ngokucophelela imininingwane ye-akhawunti yakho, chofoza uhambisa, bese ulinda ukuthi ukheshi angene ku-akhawunti yakho.
Iyini i-Europa Casino?
I-Europa Casino iyikhasino ye-inthanethi eyasungulwa ngo-2003 enikeza amakhasimende ayo isevisi enhle iminyaka engaphezulu kwamashumi amabili eminyaka!Casino is an online casino founded in 2003 which has been serving its loyal customers for over two decades!
Ubani umnikazi we-Europa Casino?
I-Europa Casino ngeye-Universe Entertainment Services futhi iyiphethe.
Ingabe i-Europa Casino inezici zokubhejela ezemidlalo?
Okwamanje, i-Europa Casino ayinikezi izici zokubheja ezemidlalo.